Uyifaka njani i-Apache web server kwi-Ubuntu 18.04? | Ubunlog
Apache Ngumthombo ovulekileyo, umnqamlezo weqonga lomncedisi wewebhu Esebenzisa umthetho olandelwayo we-HTTP / 1.12 kunye nombono wesiza esibonakalayo. Injongo yale projekthi kukubonelela ngokukhuselekileyo, okusebenzayo, kunye nokwandiswa kweseva enika iinkonzo ze-HTTP ngokuvumelanisa nemigangatho yangoku ye-HTTP.
Iseva yewebhu yeApache Ihlala isetyenziswa ngokudibanisa ne-MySQL database, ulwimi lokubhala lwe-PHP kunye nezinye iilwimi. ithandwa njengePython kunye noPerl. Oluqwalaselo lubizwa ngokuba yi-LAMP (iLinux, i-Apache, i-MySQL kunye nePerl / iPython / i-PHP) kwaye yenza iqonga elinamandla nelomeleleyo lophuhliso kunye nokusasazwa kwezicelo ezisekwe kwiwebhu.
1 Inkqubo yofakelo lwe-Apache
2 Imiyalelo esisiseko yeApache
3 Iimodyuli ze-Apache2
Inkqubo yofakelo lwe-Apache
Ngenxa yokuthandwa kakhulu kwesicelo inokufunyanwa ngaphakathi koovimba Uninzi lonikezelo lweLinux, ke ukufakwa kwayo kulula.
Kwimeko ye-Ubuntu 18.04 zombini idesktop kunye neseva Siya kuxhomekeka kwiphakheji engaphakathi koovimba.
Kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Solo kufuneka siqinisekise ukufakwa kwaye zonke iipakeji eziyimfuneko ukuze i-Apache isebenze kwikhompyuter yethu ziya kufakwa.
Igqityiwe inkqubo Kufuneka siqinisekise kuphela ukuba ifakwe kakuhle, koku kwisiphelo esikwenzayo:
Phi Sifanele ukufumana impendulo efana nale:
Ngale nto siyabona ukuba inkonzo ifakiwe kwaye isebenza ngokuchanekileyo. Nangona sinenye indlela yokuqinisekisa oku.
El Enye indlela kukucela iphepha le-Apache, kuba oku kufuneka singene kwi-ip idilesi kwisikhangeli sethu.
Ukuba abayazi idilesi ye-IP kwikhompyuter yakho, banokuyifumana ngeendlela ezahlukeneyo kwilayini yomyalelo.
Kufuneka siphumeze lo myalelo kuphela:
Xa sisenza njalo, siya kuboniswa uluhlu lwazo, banokuvavanya isikhangeli ngasinye nganye, sinokuchonga idilesi yethu ye-IP xa oku kulandelayo kuboniswa kwisikhangeli:
Eli liphepha le-Apache elisibonisa ukuba liyasebenza kwikhompyuter yethu kwaye lisibonisa umkhombandlela apho ineefayile zoqwalaselo ezithile.
Imiyalelo esisiseko yeApache
Sele i-Apache web server isebenza kwinkqubo yethu, Kuya kufuneka uyazi imiyalelo esisiseko koku, kuba ngale nto sinokuqala okanye simise inkqubo ukuba kukho imfuneko.
Imiyalelo emibini esisiseko kukuqala nokumisa inkonzo kwikhompyuter yethu, ukulungiselela oku kuphela Kuya kufuneka siphumeze kwisiphelo sendlela xa sifuna ukuqala i-Apache:
Ngexesha ukumisa i-Apache esiyenzayo:
Sikwanamathuba okuba qala inkonzo kwakhona ungayeki, oku sikwenza kuphela:
Ngoku omnye umyalelo onokuba luncedo kakhulu xa usebenza kwaye sifuna inkqubo yokuhlaziya, singawenza lo myalelo ongazukuqhawula uqhagamshelo esele lukhona neseva:
Kwimeko apho ufuna ukukhubaza inkonzo senza kuphela:
Kwaye kwimeko echaseneyo kwimeko yokuphinda unike amandla inkonzo kwiqela lethu siphumeza kuphela:
I-Apache2 ngumncedisi onokuncediswa yimodyuli. Iimpawu ezongeziweyo ziyafumaneka kwiimodyuli ezinokulayishwa kwi-Apache2. Ngokuzenzekelayo, iiseti zeemodyuli zibandakanyiwe kwiseva ngexesha lokudityaniswa.
Ubuntu buhlanganisa i-Apache2 ukuvumela ukulayishwa kwemodyuli enamandla. Imikhombandlela yoqwalaselo inokubandakanya ukubakho kwemodyuli ngokuzibandakanya kwibhloko .
Banokufaka iimodyuli ezingaphezulu ze-Apache2 kwaye bazisebenzise kwiserver yewebhu. Umzekelo, sebenzisa lo myalelo ulandelayo kwikhonsoli yokufaka imodyuli yokuQinisekiswa kwe-MySQL:
Kwikhowudi ye- / etc / apache2 / mods-available you can check the add-on modules.
I-Apache inenani elikhulu labo, kodwa ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ndincoma funda eli candelo ukuba abafana abavela kwi-Canonical babelane nathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Uyifaka njani i-Apache web server kwi-Ubuntu 18.04?